Nagu saabsan | Wuxi Qingyuan Laser Technology Co., Ltd.
Tan iyo markii la aasaasay 2008, Cheeron Laser (QY Laser) wuxuu si isdaba joog ah u horumarey si uu macaamiisha u siiyo mashiino tayo sare leh mashiinada goynta laser qiimo jaban iyo sidoo kale waa mid ka mid ah shirkadaha ugu horreeya Shiinaha.
Cheeron Laser (QY Laser) waxaa la aasaasay 2008, oo loogu talagalay kaliya mashiinka goynta fiber laser R & D, naqshadeynta, wax soo saarka iyo iibinta. Waxaan fiiro gaar ah u siineynaa tikniyoolajiyadda, tayada, dalabka, u hoggaansanaanta suuqa iyo qaadashada "waxtarka sare, waxqabadka sare, saxsanaanta sare" sida himiladeenna. Waxaan sidoo kale soo saarnay in kabadan 80 nooc oo badeecooyin ah, nooc kasta oo mashiin ah ayaa gaaray heerka hogaaminta suuqa gudaha iyo kan caalamiga ah.
Maxaa ka dhigaya Cheeron Laser (QY Laser) mid ka duwan 90% ka mid ah warshadaha gudaha ee ka baaraandega mashiinnada goynta leysarka indhaha:
1. Waxaan bilownay soo saarista mashiinada goynta leysarka fiber-ka tan iyo sanadkii 2008. 12 sano oo arimahan dhexdeeda ah waxay keeneen khibrado badan
2. Waxaa naga go'an mashiinnada goynta leysarka fiber-ka laga bilaabo 700 watt illaa 15000 watt, waxaanan higsaneynaa inaan ka dhigno kan ugu fiican si aan ula tartamo kuwa kale. Hadda waxaan siinaa 1500 watts ilaa 20000 watts.
3. Shirkaddu waxay leedahay koox xoog leh oo R & D ah, oo ay ku jiraan 65 injineerro, oo ay ka mid yihiin 10 oo in ka badan 10 sano khibrad u leh mashiinnada leysarka fiber, kuwaas oo diiradda saaraya horumarinta tikniyoolajiyadda cusub iyo qalabka teknolojiyada sare, oo naga dhigaya had iyo jeer hogaamiyaha suuqa.
4. Waxaan leenahay koox dhalinyaro ah oo khibrad u leh iibinta iibka kadib 60 injineero maxalli ah iyo 5 injineero ajnabi ah.
Ka sokow, waxaan haynaa koox farsamo oo xoog leh oo aan bixin karin oo keliya mashiinnada caadiga ah, laakiin sidoo kale u habeyn kara iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Kooxdayada udub dhexaadka u ah waxay leeyihiin shahaado heer sare ah iyo dhakhtar, kuwaas oo asal ahaan ka soo jeeda codsiyada leysarka iyo cilmi baarista dibedda, iyo in ka badan 10 sano oo khibrad ah oo ku saabsan warshadaha laser-ka.
Kooxda Farsamada: waxaan haynaa 65 farsamo yaqaanno
8 Injineerro farsamo sare, inta badan mas'uul ka ah leysarka R&D.
25 farsamo-yaqaanno dhexdhexaad ah, oo inta badan mas'uul ka ah ka-hor-iibinta taageerada farsamada iyo adeegga iibka kadib, si loo hubiyo xasilloonida shaqada mashiinka iyo kalsoonida suuqa;
32 injineerada yar yar ee farsamada, inta badan masuulka ka ah wax soo saarka iyo xakamaynta tayada, si loo hubiyo mashiinno tayo sare leh, waxqabad sare leh.
Shirkaddu waxay ku dhegan tahay fikradda "ku guuleysiga tayada". Ka dib 8 sano oo horumar iyo koritaan ah, waxa ugu muhiimsan ayaa ah inaad kasbato kalsoonida macaamiisha iyo sumcad wanaagsan.
Waxaan ku kalsoonahay inaan noqono lammaanahaaga ugu fiican!